Maalinta: Ogast 7, 2019
Tandem Paragliding Pilot Shahaado Qaran ayaa la Ansixiyay
Awooda Qaranka ee Tandem Paragliding Pilot (Heerka 5) oo ay maamusho Fethiye Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha; Waxaa ansixiyay Hay'ada Xirfad Farsamadeedka (VQA) waxayna dhaqan gashay. Fethiye Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, Tandem Yamac [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMİ), 2019 bishii Luulyo ee duulimaadyada diyaaradaha, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca laga qaaday. Marka loo eego, 2019 bishii Luulyo; Gaadiidka diyaaradda ee tagaya iyo ka soo degaya garoonka diyaaradaha [More ...]
Safarka Dahabka ee 'Horn Horn Travel' oo wata Doomaha Nostalgic iyo Tareenka Ciidul Adxa
Matxafka Rahmi M. Koç wuxuu martida u tagi doonaa Dalxiiska Dahabka ee Dahabiga ah ee Golden Horn Tour oo ay ku qaadan doonaan Ciidul Adxaa. Matxafka Rahmi M. Koç wuxuu la hadlay martida isagoo soo ururiyey tiro badan oo uruurin ah min meelaha laga raaco ilaa gawaarida 'Submarine' [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli waa Bilaash Waqtiga Bayram. Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, inta lagu guda jiro Ciidda Adxaa waxay muwaadiniintu la kulmi doonaan asxaabtooda iyo eheladooda si ay u siiyaan adeeg gaadiid oo bilaash ah. Xaaladda guud ee muwaadiniinta 11 Ogosto [More ...]
Madaxweynaha İmamoğlu wuxuu baarey Galataport
Kadib “mashruuca Büyükyalı ee Zeytinburnu iyo“ mashruuca Seagull aki ee Kabataş, Madaxweynaha IMM Ekrem İmamoğlu ayaa sidoo kale booqday Galata. Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay inuu booqan doono dhammaan mashaariicda magaalada saameyn ku yeelan doona wuxuuna yiri, tanesi Tani waa mid ka mid ah mashaariicda 20 ee aan aqoonsannay. Kuwani [More ...]
İBİKE, oo loo yaboohay dadka deggan magaalada Istanbul İBB, waxaa adeegsaday 481 kun oo qof sanadkii la soo dhaafay. Mashruucan, oo loogu talagalay in lagu abuuro meel kale oo gaadiidka ah, oo faa'iido u leh deegaanka iyo caafimaadka aadanaha, ayaa loogu talagalay in lagu faafiyo magaalada Istanbul oo dhan. Istanbul [More ...]
Isweydaarsiga Karakoyun Asphalted
Duqa Magaalada Sanliurfa ee Magaalada Caasimadda ah Zeynel Abidin Beyazgül'un ayaa tilmaamaha lagu dardar gelinayo shaqada dhismaha ee Isweydaarsiga Buundada Karakoyun ka bilaabmay. Duqa magaalada Zeynel kadib shaqooyinka waxaa joojiyay shirkada qandaraaslaha kahor [More ...]
Murat Çakır Waxaa loo magacaabay İSPARK Agaasime guud
Mr. Ekrem İmamoğlu, oo xafiiska yimid ka dib doorashadii Golaha Deegaanka ee Magaalada Istanbul, wuxuu sameeyay shaqaalaha maamulka sare ee Dowlada Hoose. Xaaladda guud, Mr. Murat Çakır waxaa loo magacaabay Maareeyaha Guud ee İSPARK. Xawaare Karti Baabuur leh Kalsoonida [More ...]
Tijaabada Mootada Istambul ee Istanbul Approzmir waa la ogolaaday! Ma aha 3,5 5 Qaadashada Waqtiga
Timur Akkurt, saxafiga, wuxuu tijaabiyey masaafada u dhexeysa Istanbul iyo Izmir. Akkurt 's imtixaanka waddada iyo sidoo kale mid ka mid ah uu ugu nidaamyada navigation used in Turkey [More ...]
Buundo cusub ayaa laga dhisayaa wabiga Melet ee wadada xeebta Badda Madoow iyadoo ay socdaan dadaallada Dowlada Hoose ee Ordu. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, bulunan Waxay ku taal wadada xeebta Badda Madoow [More ...]